Xildhibaano walaac ka muujiyay habkii guddoonka u maamulay doodii warbixinta miisaaniyada | Burconews
Xildhibaano walaac ka muujiyay habkii guddoonka u maamulay doodii warbixinta miisaaniyada
Muqdisho_Qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyay habkii guddoonka baarlamaanka uu u maamulay warbixintii miisaaniyada.
Shir jaraa’id oo ay maanta ku qabteen xildhibaanada magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku tilmaameen xildhibaanadaas in xukuumada farogelin ku hayso howlaha golaha ay carqaladeyneyso, iyaga oo intaas raaciyey in ay xukuumadda carqaladeyneyso howlaha golaha.
“Waxaan walaac ka qabnaa sidii loo maamulay dooddi la doonayay in maalintii sabtida ahayd ee laga soo gudbay laga yeesho sabtidii 24-kii bishan ee sida qaldan loo maamulay iyo weliba in maanta uu baaqday shirkii golaha shacabka iyada oo goluhu u yaallaan ajendayaal muhiim ah, oo uu ka mid yahay ajendihii aan xirmin maalintii dhoweyd,”ayuu yiri xildhibaan Cabdifitaax Cusmaan Daahir oo ka mid ahaa xildhibaanada Baarlamaanka oo shirka jaraa’id qabtay.
Xildhibaanka ayaa ku tilmaamay baaqashada shirka maanta ee golaha shacabka inuu ka mid yahay wax uu ugu yeeray carqaladayn ay dowladu ku hayso howlaha Baarlamaanka.
Sidoo kale xildhibaanada maanta ku qabtay shirka jaraa’id magaalada Muqdisho ayaa waxa ay eedeyn u soo jeediyeen shir guddoonka baarlamaanka iyagoo si gaar ah farta ugu fiiqay in ay ku tunteen xeer hoosaadka Golaha Shacabka.
“Guddiga maaliyadda ee golaha Shacabka waxaa ay soo diyaariyeen warbixin ay xogo badan ku jireen oo ummadda Soomaaliyeed ay u baahnaayeen in looga jawaabo, balse waxaa taasi ka hor istaagay shir guddoonka iyagoo si bareer ah ugu tuntay qodobka 30aad ee xeer hoosaadka golaha shacabka oo dhigaya in la sugo xuquuqda xildhibaanka u leeyahay inuu ka doodo howlaha horyaalla baarlamaanka”.
Xildhibaanada ayaa sidoo kale waxa ay ku eedeeyeen xukuumadda inay kala qeybisay guddiga maaliyadda iyado maalin kahor xilligii warbixinta la soo bandhigayay ay kulamo la yeesheen xubno ka mid ah guddiga isla markaana lagu sameeyay isbedel.
Ugu dambeyntii, Xildhibaannada golaha shacabka waxaa ay ku taliyeen in golaha loo ogolaado in uu dodo sameeyo, wasaaradaha loo yeero si ay uga jawaabaan in ajende kasta oo golaha ka keenayo ay yeeshaan guddiga joogta ah iyo ajendayaasha golaha u codeeyaan,waxayna ugu baaqeen guddoomiyaha baarlamaanka in uu howlihiisa shaqo guto.